You tinyela mgbalị dị ukwuu na saịtị azụmahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ blog, ọ bụ oge na-akụ ya. Anyị dere Nhazi blọgụ maka Dummies iji nyere ndị azụmaahịa aka ịde blọgụ iji wuo ikike ma nweta ndu n'ịntanetị. Agbanyeghi na akwukwo a lekwasiri anya na ntaneti na ịde blọgụ, ihe omuma a na-agbatị na webụsaịtị webụsaịtị rue peeji akwụ ụgwọ-kwa-pịa.
Ọtụtụ n'ime unu amalitela ịgụ akwụkwọ a na nzaghachi na-akpali akpali. Anyị maara na anyị nwere onye kacha ere ahịa - mana anyị amatabeghị etu akwụkwọ a ga-esi nweta. Fọdụ ndị na-ede akwụkwọ edenyere onwe ha ma mee ka anyị mara na okporo ụzọ ha na ntụgharị ha abanyelarị na blọọgụ ha n'ime izu ole na ole iji gbasaa ụfọdụ atụmatụ ahụ. Egwu!
Ọ bụrụ na ị nyochaa akwụkwọ ahụ n'ịntanetị, anyị ga-eme nyocha nke saịtị ma ọ bụ blọọgụ gị ma nye gị ụfọdụ nzaghachi na-arụ ọrụ banyere imewe, njikarịcha njin ọchụchọ, njikarịcha ntụgharị na mkpokọta mmetụta. Anyị ga-ọbụna dee ya na post ma kọwaara ndị na-agụ ya ihe ị na-eme. Anyị na-eme nke a na blog a ma kpọọ ya "Blog Tipping"… ha mere maka nnukwu posts!
Naanị iwu bụ gị ga agụrịrị Corporate Blogging for Dummies ị ga-ezigakwa ya njikọ nke nyochaa na-ekwu nke a post. Ozugbo i mere, anyị ga-amalite. Ọ bụrụ n’itinye ụfọdụ ọrụ n’ime nyocha gị, anyị ga-etinye ọrụ na nke gị!